Vaovao - Inona no soa azon’ny ankizy mitaingina bisikileta?
Voalohany, azo atao ny fihetsika tsara mitaingina
1) Correct bowlegged, X-miendrika tongotra hatrany am-bohoka tsy fahampiana, mitana anjara toerana amin'ny fampiroboroboana ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny ankizy.
2) Manatsara ny fandrindrana sy ny fifandanjana Amin'ny alalan'ny bisikileta amin'ny sehatra samihafa, dia azo atao ny manamafy ny fifandanjana sy ny fandrindrana ny ilany havia sy havanana amin'ny atidoha.
Faharoa, tsara ho an'ny fitomboan'ny ankizy ny mitaingina bisikileta
Ny fanatanjahatena dia toetran'ny ankizy, ary ny mitaingina bisikileta dia afaka mampiroborobo ny fivoaran'ny hetsiky ny ankizy, ny fahaiza-mandanjalanja, ny voalohany amin'ny mitaingina bisikileta, marina.
Arakaraky ny atleta mivoatra kokoa ny zaza.
Fahatelo, afaka mamboly herim-pon’ny ankizy ny mitaingina bisikileta
Ankoatra ny 'fahaiza-manao' tsotra, ny bisikileta dia manampy ny ankizy hanana herim-po sy fahatokisana, ary koa ny fahaizana mifandray sy miara-miasa.
Fahaefatra, misy fiantraikany ara-batana ny mitaingina bisikileta
Ny bisikileta dia afaka manatsara ny fiasan'ny cardiopulmonary, mampihatra ny tanjaky ny hozatry ny rantsana ambany ary manatsara ny fiaretan'ny vatana manontolo.Mitovy amin’ny milomano sy ny fihazakazahana ihany koa ny vokatry ny fanazaran-tena miaritra eo amin’ny taova anatiny.
Fahadimy, ny mitaingina bisikileta dia afaka manatsara ny fandraisan'ny zazakely
Ny vokatry ny fikarohana momba ny fitsaboana ara-panatanjahantena maoderina dia mampiseho fa ny bisikileta dia manjaka amin'ny lafiny samihafa, ary ny fifandimbiasan'ny tongotra roa dia afaka mampivelatra ny fiasan'ny atidoha havia sy havanana miaraka.
Mahafinaritra ny mitaingina bisikileta
Arakaraky ny fotoana laninao any ivelany mitaingina bisikileta no hisokatra kokoa ny sainao ary hahatsapa ho tony sy mavitrika ny zanakao.
7. Fomba mahomby hifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny bisikileta
Afaka manamafy ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fitondrana ny zanakao amin'ny bisikileta. Mifidiana zaridaina an-dalambe na lalana ambanivohitra ary mandehana miaraka amin'ny zanakao ao anatin'ny tontolo milamina, izay hahatonga ny zanakao hatoky anao bebe kokoa ary ho lasa namana tsara amin'ny tsirairay. .
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd. hita ao Shijiazhuang, Hebei Province, dia matihanina fanafarana sy fanondranana varotra orinasa, manana traikefa an-taonany maro ny bisikileta raharaham-barotra.
Pink Balance Bike, Bisikileta/bisikileta karbaona 12 mirefy, Balance bisikileta, Girls Balance Bike, Vehivavy Mountain Bike, 20 mirefy bisikileta/bisikileta,